Izindaba - i-ZPMC double container ukufinyelela stacker ilapha
I-ZPMC double container ukufikelela isitaki lapha
Muva nje, iShanghai Port Machinery Heavy Industry yethule isabalalisi esinamabhokisi amabili esingakwazi ukuzivumelanisa nochungechunge oluphelele lwenkontileka yokufinyelela ngesisekelo se-standard-container eyodwa yokufinyelela isitaki.
Isitaki esinamabhokisi amabili sinokuhleleka okuhleleke kwesakhiwo kanye nokwakheka kwesakhiwo. Ingaphakamisa iziqukathi ezimbili ezijwayelekile ezingama-20 noma izinyawo ezingama-40 ngasikhathi sinye, futhi ingagcina ifike esitezi se-9. Isisindo sokuphakamisa esiphezulu ngamathani ayi-10, okungaphezulu kwama-stackers ajwayelekile. Ukusebenza kahle kokushintshwa komkhiqizo kukhuphuke ngaphezu kuka-40%, okungahlangabezana ngokushesha nokushintshwa kwesiqukathi esingenalutho, ukustaka, futhi kuphephe futhi kuthembeke.
Ngokukhula okungaguquki kwempahla yezimpahla zamachweba kanye nokuthuthuka okuqhubekayo kokuhlanganiswa kwezitimela, ukusetshenziswa kweziqukathi sekuvame kakhulu, futhi imakethe yokuphatha imishini ikhule ngokwengeziwe. Njengamanje, inkampani ithole ama-oda amaningi wokuthekelisa ama-stackers afinyelela ama-container amabili, futhi isiqedile ukuthunyelwa kwemishini eyodwa.
Abaphathi bamakhonteyina ngomunye wemishini ebaluleke kakhulu esetshenziswa emachwebeni olwandle, emagcekeni eziqukathi. Kungathuthukisa ukusebenza kahle kweziqukathi ezihambayo, izitsha eziningi ezingenalutho zibekwe endaweni eyodwa, kepha isiphatho sezitsha esingenalutho singazisusa kalula zisuka kwenye indawo ziye kwenye. Hhayi kuphela isiphatho sesitsha esingenalutho, kepha futhi ama-stackers wokufinyelela womabili imishini ebalulekile yomsebenzi wokuhambisa izitsha.
Ukusebenza okuvinjelwe kwesitaki sesitsha esingenalutho
Ukusebenza kwemishini akuvunyelwe ngaphansi kwale mibandela elandelayo:
NyNoma iyiphi indawo yokuphepha efakwe kwisitaki ayikwazi ukusebenza ngokujwayelekile. Isibonelo: amalambu, izibuko ezibuka emuva, isibonisi sokusabalalisa esisetshenziswayo, ukubuyisela emuva i-buzzer, njll.
⑨Amabhuleki, amagiya okuqondisa, izibambo zokusebenza nezinye izikhungo zinamaphutha.
Imithetho yokusebenza kwesiphathi esingenalutho
ForeNgaphambi kokuqala, hlola futhi uqinisekise ukuthi akekho okokusebenza nolayini wokugijima. HenUma umshini unanoma iyiphi i-alamu, akuvumelekile ukuqala injini ukusebenza. Imbangela ye-alamu kufanele itholwe futhi i-alamu ingasuswa ngaphambi kokuthi injini iqalwe.
Lapho isigwedlo segiya sifakwa kokungathathi hlangothi, injini ingaqalwa, ngaphandle kwalokho ukuqala akuvumelekile.
Sure Qiniseka ukuthi akekho ohambayo noma omi ngaphansi kwesisabalalisi (noma ngabe kukhona isisindo sokuphakamisa), futhi akekho ovunyelwe ngemuva kwe-counterweight ngesikhathi sokusebenza, ngaphandle kwalokho akuvunyelwe ukubuyela emuva.
Umshayeli kufanele abheke lapho kuhamba khona uhambo futhi anake ngokukhethekile izindawo lapho kungavela khona abantu noma ezinye izimoto. Uma inkambu yokubuka ithinteka ngumthwalo, umshayeli kufanele aqhube imoto ibuyele emuva.
Akuvunyelwe ukuthwala abantu ngaphandle kwekhumbi noma emotweni. Ekhumbini kuphela
Isikhathi Iposi: Jul-26-2021
I-China Construction Imishini Imp & Exp Co., Ltd.